Geerida ka Dhalatay Kharaxii ka Dhacay Isgoyska Zoope oo sii Korortay (VIDEO)
Qaraxii xooganaa ee shalay ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho ayaa maanta weli Barxadda Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho waxaa daadsan meydad aad u fara badan oo la kala garan la’yahay cida ay yihiin, kadib markii dadkaasi sixun ay ugu gubteen qaraxii masiibada ahaa ee shalkay dhacay .
Isbitaalka gudihiisa ayaa waxaa la dhigay Baco waaweyn oo meydadka la dhex dhigay, si dadka ehelada ah ee Isbitaalka imaanaayo ay u aqoonsadaan hadba qofka ka maqan.
Suxufiyiin badan oo gaaray Isbitaalka Madiina ayaa sheegaya in la kala garan la’yahay meydadka, maadaama ay gubteen oo xittaa qofka ehelka ah ay ku adag tahay inuu garto meydka qofka uu raadinaayo.
In ka badan 20 ruux meydkooda oo lagaran la’yahay ayaa bacaha ku jira, iyadoo boqolaal dad ahna Isbitaalka ayeey ku sugan yihiin kuwaasi oo raadinaya dad ka maqan nolol iyo geeri aysan ogeyn meesha ay ku dambeeyaan.
Waxyaabaha argagaxa leh ayaa waxaa ka mid ah in Hooyooyinka qaar Isbitaalka dhexdiisa ay isaga dhex oynayaan, iyaga oo ilinta ay ka daadanayso, waxayna sheegayaan in caruur ka maqan nolol iyo geeriba meel aysan ku ogeyn.
Hooyo ka mid ah dadkii Isbitaalka joogay ayaa hadaladii dareenka lahaa ee ay ku hadleysay waxaa ka mid ahaa “Qofkii Wiilkiisa oo meyd ah helaa ayaa nasiib leh, aniga nolol iyo geeri midna kuma haayo.”
Isbitaalada kale ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa hor buuxa Hooyooyin badan oo iyaguna raadinaya dad ka maqan nolol iyo geeriba, sidoo kale Isgoyska Zoobe saaka waxaa tagay Boqolaal ruux oo dad ka maqan raadinaya.
ATTENTION EDITORS – VISUAL COVERAGE OF SCENES OF DEATH Civilians carry the dead body of an unidentified man from the scene of an explosion in KM4 street in the Hodan district of Mogadishu, Somalia October 14, 2017. REUTERS/Feisal Omar
October 16, 2017 Geesey